umshini wokuphamba wezinhlanzi owenza ama-pellets e-feed ezintantayo nawo wokudla kwezilwane ezifuywayo
Isilo & Fish Pellet Ukwenza Umshini Isicelo
Umshini wethu wokwenza izinhlanzi ulungele ukukhiqizwa kwama-pellets kusuka okusanhlamvu, utshani, amaprotheni kanye nama-molasses ngezinhloso zokuthengisa. Ama-pellets womkhiqizo wethu wokugcina unomakhi emihle, acebile izakhi zomzimba, ube nokunambitheka okungafani nenye, futhi anezimo ezahlukahlukene. Zifanele izilwane zasemanzini ezinjengezimbadada, inhlanzi yegolide, inhlanzi eyikati, izinhlanzi ezishisayo njll.
Kungani ukhethe umshini wokuphaka izinhlanzi ezintantayo
Ama-pellets ezinhlanzi ezinhlanzi adliwayo adumile ekufuyeni kwezolimo zanamuhla, ukuhlinzeka ngokudla okunempilo okudingwa isitoko sezinhlanzi kanye nokwenza ngcono indawo yasemapulazini yezinhlanzi. Ngenxa yentengo ephakeme yama-feed pellets emakethe, abalimi abaningi bavame ukuthenga imishini yokwenza imishini yokwenza izinhlanzi ukukhiqiza ama-pellets bebodwa ukuze behlise izindleko. Lapha kunikezwe inhlanzi eyomile yohlobo eyomile ngokwenza ama-pellets feed ezintantayo, okuyiyo onguchwepheshe obamba iqhaza ekuphakelweni kwezinhlanzi ezisezingeni eliphakeme ngaphandle kwesimo sezinto ezinukayo. Nge-extruder eyodwa esezingeni eliphezulu nge-drive drive, umshini wokuphamba wezinhlanzi oyintantayo uyithuluzi elifanelekile elincane lokuphakelayo lokuphakelayo kwezitshalo kanye nezinhlanzi zasemanzini.
Izinto ezihlanza umshini weFisher Pellet Machine
● Ama-raw materia lLe ama-pellets okondla afaka amaprotheni ezilwane namaprotheni ezitshalo. Amaprotheni ezitshalo aqhamuka emmbolweni, irayisi, ukolweni, ubhontshisi, uphizi wekhekhe, njll; Amaprotheni ezilwane avela ekudleni kwezinhlanzi, isidlo se-shrimp, isidlo se-crab, ukudla kwe-sleeve-fish nokunye ungangeza enye isithako ngokuya ngezidingo nemikhuba yokudla yezilwane.
● Izinqubo Ezibandakanya ikakhulu:Ukugaya okwenziwe ngezinto ezibonakalayo, ukuxuba ngezinto ezibonakalayo, pellets extruding, pellets omisa, nokupakisha i-pellet. Yonke inqubo ingalawulwa ngokuzenzakalela.
Izici zeFish Pellet Ukwenza Umshini
2. The umshini wokuphaka ama-pellet uhlala endaweni ephansi kakhulu futhi udinga ukutshala imali ephansi emsebenzini wokwakha. Isakhiwo esingamamodeli silungele ukuhlangana nokuhlangana, lula ukuthunyelwa nokufakwa.
3. Ukulawulwa okuzenzakalelayo, i-alamu iyatholakala. Ukusebenza kulula futhi kulula.
4. Ububanzi obusebenzayo: Umshini owenza izinhlanzi ezintantayo ezintanta ungakhiqiza zombili izinhlanzi ezidonsayo futhi ezihamba kancane, kusebenza kwabanikazi bezinhlanzi zasemapulazini kanye nabakhiqizi bezokudoba kwezinhlanzi.